Ny ailurophilia na ny fitiavana saka | Noti saka
Inona no atao hoe ailurophilia?
Maria Jose Roldan | | curiosities
La ailurophilia izany dia teny iray izay mety hiteraka korontana ny dikany. Raha ny marina dia mahazatra ny mieritreritra fa teny manondro zavatra tsara tarehy io, fa raha ny tena izy dia lamin'ny fitondran-tena izay somary hafahafa ihany. Raha mieritreritra ny niandohan'ity teny ity isika dia ho hitantsika fa avy amin'ny teny grika hoe ailuros izay midika hoe saka, ary fil izay adika ho fitiavana. Teny mbola tsy fantatra loatra eo amin'ny mponina izy io, na ny Royal Spanish Academy aza tsy niditra tao amin'ny rakibolana.
Raha mpanaraka ny bilaogy ianao dia azo antoka fa raiki-pitia tamin'ny fijery sy ny fihetsik'ilay namanao tongotra efatra ianao, sa diso aho? Ny olona volom-borona dia mahalala ny fomba hahatongavany ho tiana, na dia tsy mikasa ny hanana biby vaovao ao an-trano aza ianao amin'ny voalohany. Na izany aza, tsy maintsy fantatrao hoe aiza ny fetra.
1 Inona no atao hoe ailurophilia?
2 Ailurophilia ho paraphilia
2.1 Ny Ailurophilia dia mifandray amin'ny aretina mitaiza
3 Inona no antony
5 Tsy tokony hafangaro amin'ny Noa Syndrome
6 Saka, andraikitra
Ailurophilia dia paraphilia, izany hoe lamin'ny fitondran-tena mahamenatra izay loharanom-pahafinaretana lehibe indrindra, amin'ity tranga ity, ny saka. Izany dia, avy eo, andiana fahatsapana diso izay atosiky ny biby amin'ny olona sasany.
Ny soritr'aretin'ny paraphilia dia miankina amin'ny karazana fiviliana ara-nofo. Raha sendra ailurofilia dia mety misy ny olona tsirairay nofinofy ara-nofo, fitondran-tena mifandraika amin'ny fampiasana zavatra miendrika saka, mahatsapa fahafinaretana rehefa miakanjo toy ny totohondry na mahita olona mitafy toy izany,… Raha fintinina, olana iray mety hanakana ny olona tsy hanana fiainana ara-dalàna izany.
Amin'io lafiny io, ny olona dia afaka mampiseho ambaratonga samihafa amin'ity toe-javatra ity ary izany no antony maha-zava-dehibe ny fanekena azy ara-potoana. Manaraka izany, holazainay aminao ny momba ny vondrona sasany misy arakaraka ireo soritr'aretina manokana mety hijaly.
Amin'ity tranga ity, ilay olona dia manana fitiavana manokana biby, amin'ity tranga ity amin'ny saka. Ilay olona dia tsy mihevitra azy io ho olana satria mahatsapa ny fitiavany ho zavatra mahazatra sy voajanahary. Mahatsiaro ho tsara izy ireo manana saka ary tsy tokony hitarika fihetsika tsy mahazatra izany.
Ailurophilia ho paraphilia
Rehefa miresaka momba ny fikorontanana isika dia efa miresaka momba ny mety hisian'ny olana manokana amin'ny fihetsiky ny olona manintona saka. Ity fanintonana ity dia mety hiafara amin'ny fahatanterahana. Rehefa mitranga izany, ny aretin-tsaina dia mety hiseho noho ny paraphilia (manintona ny saka tsy voafehy).
Amin'ity tranga ity dia mety misy ny fiviliana ara-nofo izay misy ny firaisana tsapan'izy ireo amin'ny biby. Ny olona manana an'io karazana paraphilia io dia afaka manapa-kevitra raha hanao zavatra mifanaraka amin'ny hetahetany na aleo tsy mihetsika. Na dia manana an'io karazana eritreritra io fotsiny aza dia efa ilaina ny mitaky saina sy saina maika.
Rehefa olona manana an'io karazana aretina io matetika dia manana olana amin'ny fiainana normal, zavatra izay hisy fiantraikany eo aminao manokana sy amin'ny matihanina.
Ny Ailurophilia dia mifandray amin'ny aretina mitaiza
Etsy ambany dia holazainay aminao fa tsy mila afangaro amin'ny aretina "Syndrome Noa" ity aretina ity fa ilaina ny mitadidy fa ny aretin-tsaina mitahiry aretina dia aretin-tsaina ahafahan'ny olona manangona biby maro nefa tsy mikarakara azy ireo, ka afaka ny saka miafara amin'ny aretina na amin'ny olana ara-tsosialy lehibe. Rehefa voan'io aretina io ny olona iray matetika ianao tsy mahalala ny manjo anao ary lasa sarotra kokoa ny fitsaboana satria mihevitra izy ireo fa tsy mila fanampiana.
Inona no antony
Zava-dehibe ny mahatakatra izay mety ho antony hitadiavana ny fitsaboana sahaza azy amin'ny tranga manokana. Tsy dia fantatra loatra izay antony mahatonga ny ailurophilia, na dia heverina fa ny antony samihafa aza dia mety mitana andraikitra. Amin'io lafiny io dia mendrika ny hojerena:
Antony fototarazo. Ny olona iray manana an'ity karazana predisposition genetika ity dia mety hanana fotoana fohy kokoa amin'ny fiheverana ny toe-javatra na biby sasany.
Traikefa mahatsiravina. Ny traikefa mahatsiravina amin'ireo biby ireo amin'ny fahazazanao dia mety miteraka fihetsika tsy mahazatra amin'ny fivelaran'ny olon-dehibe.
Toetran'ny olona. Misy toetra manokana na aretina miharihary izay mety hahatonga an'io aretina io hiseho ho aretina miteraka faneriterena na olon-kafa.
Ny fitsaboana dia tanterahina amin'ny alàlan'ny Fifantohana ara-tsaina, ary indraindray, miaraka amin'ny fanafody aretin-tsaina. Toy ny aretin-tsaina rehetra, miankina amin'ny marary ny faharetany.
Tsy tokony hafangaro amin'ny Noa Syndrome
Ny Ailurophilia dia tsy tokony hafangaro amin'ny Syndrome Noa. Ireo manana ailurophilia dia afaka miaina miaraka amin'ny saka sy mikarakara azy ireo tsara, fa ny olona voakasik'izany Syndrome Noa tsy mahatsapa karazana firaisana manintona ny saka izy ireo. Mety ho tian'izy ireo izy ireo, eny, amin'ny fotoana itiavany azy ireo mino fa mamonjy azy ireo. Hafa mihitsy anefa ny zava-misy.
Ny biby dia azo karakaraina tsara amin'ny voalohany satria vitsy izy ireo, fa rehefa betsaka kokoa ny entina ao, mitsahatra tsy mitazona azy ireo, farafaharatsiny mba tsara. Arak'izany, rehefa mandeha ny fotoana dia voatery miaina anaty toe-javatra mahatsiravina ireo biby, noho ny fofon'izy ireo sy ny mony. Ary rehefa misy te-hiantra azy ireo, ilay olona voakasik'izany dia mandà tsy ho entina fotsiny; hany ka amin'ny ara-dalàna dia tsy maintsy atao amin'ny fomba fitsarana.
Ny saka dia biby mahaleo tena sy kely, noho izany dia matetika no biby ankafizin'ireo voan'io aretina io, eny fa na dia ny alika aza. Raisina an-tsaina izany, isaky ny fantatra ny tranga iray dia tena zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny polisy, ho an'ny soa ho an'ny biby, ary koa ho an'ireo olona voakasik'izany.
Hatramin'ny fotoana voalohany nanapahanay hevitra fa hampiditra saka amin'ny fiainantsika dia manolo-tena izahay karakarao ary hajao nandritra ny taona maro nijanonanao teo anilanay. Ny mpikarakara tsara dia hitondra anao any amin'ny mpitsabo biby, hanome anao sakafo madio sy rano madio isan'andro, hanome anao toerana fialan-tsasatra sy toerana hilalaovana, ary indrindra indrindra, hanome anao be dia be izy, fitiavana be isan'andro.
Tsy misy biby tokony hoentina mody an-trano noho ny filana fotsiny, mainka ny hanomezana fahafaham-po ny filana tsy salamaFa satria tena te hiaina miaraka aminy ianao. Tokony horaisina an-tsaina ihany koa fa, na dia mahaleo tena kokoa noho ny alika aza ny saka dia tsy antony tokony hamoahana azy ireo any ivelany tsy misy fanaraha-maso na any an-trano irery mandritra ny andro. Mila mandany fotoana miaraka amin'ny fianakavianao ianao ary asaivo mahatsapa tena ho anisan'io ianao, raha tsy izany dia hanomboka ho leo ianao ary noho izany dia hanao zavatra tsy tokony hataonao, toy ny fikororohana fanaka sy / na ambainy, manaikitra, mijanona mitokana, ary / na mivoaka avy ao anaty lovia.
Raha vonona hizara ny fiainanao amin'ny biby afaka miaina mandritra ny 20 taona ianao, ary mandritra izany dia hitsiky ianao, dia tonga ny fotoana hanombohanao mitady izay ho namanao akaiky indrindra. Raha tsy izany, tsara kokoa ny miandry kely mandra-pahatongan'ny fotoana mety indrindra.
Ny fandaozana sy ny fanararaotana biby dia olana roa manimba ny saka. Izay tena tia azy ireo ihany, izany hoe ireo rehetra izay manana aretin-tratra toa anao ihany no mahalala izany ny fomba tokana ahafahantsika mitsahatra tsy manahy momba ireo olana ireo dia manomboka amin'ny alàlan'ny fanaovana safidy tsara. Ny zavatra hafa rehetra dia avy eo, na ny neutering na ny spaying aza, samy fandidiana tena lehibe izy ireo mba hisorohana ireo kittens nilaozana.
Raha tena tia saka ianao dia hisaotra anao izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Inona no atao hoe ailurophilia?
Vanessa dia hoy izy:
Ny Ailuraphilia dia tsy fitiavana na mahaliana ny saka ... karazana paraphilia (endrika fitondran-tena momba ny firaisana) izy io. Izay adika amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny saka ...
Valiny tamin'i Vanesi
Wilbert dia hoy izy:
Tsy maninona izay lazain'ny olon-kafa. Mpitia sy mpiaro kittens aho.
Valiny tamin'i Wilbert
armandale lievano dia hoy izy:
Andriamanitra inona no toe-tsaina ananako saka 3 ary ankafiziko izy ireo toy ny biby fiompy izay mahatsapa fa manintona ny firaisana ara-nofo dia efa fanararaotana raha ny tena izy ary fanalana hetaheta ihany no afaka mieritreritra fa ny fitiavana saka dia misy fisarihana manantona azy! Hodinihiko ao anatinao fa manana ny fahafahan'ny olombelona manavaka isika. Avy amin'Andriamanitra inona ny hadalana.
Mamaly an'i Armandale lievano
Eny, adala izy io, toy ny "filia" rehetra (zoophilia, pedophilia, sns.).
Ny saka dia azo tiavina, hajaina, karakaraina, zavatra tsy maintsy atao izany raha ny marina, fa tsy tokony hampijaly azy ireo mihitsy ianao na hanery azy ireo hanao zavatra tsy tiany. Feline izy ireo, mpiremby, fa tsy kilalao.
Aurora dia hoy izy:
Nandinika aho ary ny teny dia manondro fitiavana fotsiny, tsy mitaky fiviliana ara-nofo na ara-pihetseham-po izany, tsara hatrany ny tsy manaparitaka sy mamadika fankasitrahana amin-kitsimpo ho zavatra marary sy voaolana, "filia" etymologically dia midika fitiavana sy fitiavana, tsy ny firaisana fotsiny no resahina. Ka zahao ny loharano alohan'ny hamoahana zavatra !!!!
Valiny tamin'i Aurora
Aurora, izany no nataonay. Tamin'ny voalohany dia nieritreritra izahay fa midika izany fa, fitiavana saka, ary tena nanao an'io lahatsoratra io izahay. Saingy rehefa avy nanadihady izany izahay dia nahita fa tsy toy izany. Tahaka ny pedofilia na ny zoophilia. Aretina izany.
J. im dia hoy izy:
Tahaka an'i Monica, Aurora milaza aminao, ny teny amin'ny fitsipika dia mety hanondro izany, ny fitiavana saka, fa ny fampiasana ny tovana »- filia» amin'ny teny espaniola mba hanondroana fikorontanana (pedophilia, zoophilia ... sns.) Dia mahatonga ilay teny, ara-dalàna, raha tsy izany dia takatra.
Raha fintinina, tsara kokoa ny miteny hoe "saka saka", hialanao ny endrika hafahafa, ary mitovy ny dikan'izany, fa tsy misy izany firaisana ara-nofo izany.
Valiny tamin'i J. im
Jazmin dia hoy izy:
Tsara ny hevitra rehetra .fa ny marina misy fetrany .ny teny dia milaza azy ... filia sy izay rehetra dikan'izany ... aza tezitra amin'ity teny ity izay toa tsy mitondra antsika tsara izay tia antsika. Ny fahalianana dia tsy mitranga amin'ny zavatra firaisana ara-nofo efa haintsika. fa tsy antsika ity teny ity. mila manana iray hafa isika. tiavo fotsiny ny sakao
Valiny tamin'i Jazmin
Manaiky tanteraka aho, Jazmin. Misaotra anao tamin'ny hevitrao 🙂
Eny, zava-dehibe ny fahalalana azy ireo. Ity teny manokana ity dia matetika ampiasaina amin'ny fomba ratsy, izay miteraka fikorontanana.
Manantena izahay fa hanampy amin'ny famahana ny fisalasalana rehetra mety hitranga amin'ity lafiny ity.
Liz grenda dia hoy izy:
Tiako ny saka hatramin'ny fahazazako, nahafinaritra ahy ny mijery azy, zazavavy 9 taona aho ary tsy azoko tsara ny dikan'io teny grika io.
Valio i Liz Grenda
Ailurophilia dia aretina ananan'ny olona sasany.
Mijanona amin'ilay zavatra tsara, dia ny saka tianao 🙂. Amin'ny faran'ny andro dia io no zava-dehibe indrindra.
Fa maninona ny saka no tia trondro
Amin'ny taona firy no azo fandroana saka